Izindawo ze-Casino eziku-inthanethi zase-Argentina | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
(454 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Imboni yezokugembula yase-Argentina inikeza izinhlobo ezahlukahlukene zomthetho zokugembula: amakhasino, ababhuki, umjaho we-greyhound, umjaho wamahhashi, ilotho nokuningi. Abantu base-Argentina bathanda ukugembula futhi basebenzisa imali ebalelwa ezigidini ezingama- $ 4-5 ngonyaka emidlalweni yelotho, emishinini yokugembula nokubheja. I-Argentina iyimakethe yokudlala enkulu kunazo zonke eNingizimu Melika, izwe linamakhasino angama-79 nezindawo ezingaphezu kwezingu-12,000, ikhasino futhi linokukhethekile emikhunjini yemikhumbi. Kukhona nemboni ethuthuke kakhulu yokubheja ibhola. Uhulumeni uhlela ukuthi kungenzeka ukuthi izwe lemboni yezokugembula yase-Argentina lifakwe kuzwelonke kungekudala.
Ukugembula oku-intanethi e-Argentina
E-Argentina, lapho kuqoshwe khona amaphesenti aphezulu wabasebenzisi be-Intanethi esifundeni, ukugembula ku-inthanethi kusemthethweni. Ilayisensi yokuqala yokudlala ku-inthanethi ikhishwe ngo-2006, futhi kusukela lapho inikezwe amalayisense amathathu kuphela ezweni lonke. Iqiniso lokuthi amaseva asendaweni kuphela anganikeza ngezinsizakalo ekugembuleni okuku-inthanethi, akuphazamisi ama-Argentina asebenzisa njalo i-offshore ukugembula kwamasayithi , eziningi zazo ezithatha nemali yendawo. Uhulumeni wenze imizamo eminingana yokuvimba ukufinyelela ezindaweni ezingasolwandle (ngo-2008), kanye nokugembula ku-inthanethi ngokuphelele (ngo-2010), kodwa lezi zinyathelo ezinqala azikutholi ukwesekwa okudingekayo.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Argentina ezise-Casino
Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali base-Argentina
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Argentina, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi wekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali base-Argentina.
Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali base-Argentina
Bona uhlu lwamasayithi e-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Argentina, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Jabulela ukuhlukahluka okuningi kwe-roulette, i-blackjack, i-hold'em, neminye imidlalo yamakhadi. Ngeminye imininingwane, funda izibuyekezo zethu zamasayithi we-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Argentina.
Amasayithi ezemidlalo yokubheja ezemidlalo, ukuthatha abadlali base-Argentina
Bona uhlu lwamasayithi wokubheja aku-inthanethi kulo mdlalo, uthatha abadlali abavela e-Argentina, futhi unikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Beka ukubheja kwakho, khetha okulungele kakhulu i-Events koeffitsinty yakho phakathi kweziphakamiso zabaningi ababhuki be-inthanethi e-Argentina. Ngeminye imininingwane, bheka amasayithi wethu wokubuyekeza ukubheja kwezemidlalo online, uthatha abadlali abavela e-Argentina.
Amasayithi e-bingo e-inthanethi abamukela abadlali base-Argentina
Bona uhlu lwamasayithi e-bingo aku-inthanethi, uthatha abadlali abavela e-Argentina, futhi unikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ezibuyekezweni zethu zamasayithi e-bingo aku-inthanethi achaza ukukhushulwa, amabhonasi nezindlela zokufaka kumakhasi e-inthanethi ebingo atholakala kubadlali abavela e-Argentina.
0.1 Ukugembula oku-intanethi e-Argentina
0.2 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Argentina ezise-Casino
2.1 Amasayithi e-casino e-intanethi avuma abadlali base-Argentina
2.2 Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali base-Argentina
2.3 Amasayithi ezemidlalo yokubheja ezemidlalo, ukuthatha abadlali base-Argentina
2.4 Amasayithi e-bingo e-inthanethi abamukela abadlali base-Argentina